Tourism Latest News | Just another WordPress site
Tourism Latest News
HomeContactsFDI LAWGuide LicenseHotel DirectoriesHotel LicenseMinistry ActivitiesRestricted AreaTour Co,.Ltd LicenseTour Transport License
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဌေးအောင် ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှု ဆိုင်ရာ သင်တန်းများအမှတ်စဉ် (၁၁/၂၀၁၃)သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားနှင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ် (အရှေ့အာရှ) အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်မည့်ဧည့်သည်တော်များ တည်းခိုနေထိုင် စားသောက်ရေး အဆင်ပြေစေရေးအတွက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်မှာကြား
Posted on May 20, 2013 by admin	(နေပြည်တော်၊ မေ- ၇ ရက်)
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနမှ ကြီးကြပ်၍ နေပြည်တော် ဟိုတယ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ဖွင့်လှစ်သော ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်း များ အမှတ်စဉ် (၁၁/၂၀၁၃) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအား ယနေ့နံနက် (၈း၀၀)နာရီအချိန် တွင် နေပြည်တော် ဟိုတယ်ဇုန် ရှိ သင်္ဂဟဟိုတယ် GRAND BALLROOM ခမ်းမ၌ ကျင်းပပြု လုပ်ရာ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဌေးအောင် တက်ရောက်၍ သင်တန်းဖွင့်အမှာစကားပြောကြားသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ သင်တန်းဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ၀န်ကြီးဌာန၏ ရည်ရွယ်ချက် များ အနက် “ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အတတ်ပညာရပ်များ တိုးတက်ထွန်း ကားစေ၍အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပိုမိုတိုးပွားလာစေရန်´´ ယခုကဲ့သို့ ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှု ဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေရခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခုသင်တန်းသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၅)ရက်နေ့တွင် အိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ် လက်ခံကျင်းပမည့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ် (အရှေ့အာရှ) အခမ်းအနားတွင် တက်ရောက်လာ မည့် ဧည့်သည်တော်များ တည်းခိုနေထိုင် စားသောက်ရေး အဆင်ပြေစေရေးအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အထောက်အကူပြု မည်ဖြစ် ပါကြောင်း၊ ယခုဖွင့်လှစ်သည့် သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၁/၂၀၁၃)တွင် ဧည့်ကြို လုပ်ငန်းသင်တန်း၊ အိပ်ခန်းဆောင် ထိန်းသိမ်းရေးသင်တန်း၊ အစားအစာနှင့် အဖျော်ယမကာ ဧည့်ခံ ကျွေးမွေးရေး သင်တန်းနှင့်၊ အစားအစာနှင့် အဖျော်ယမကာ ထုတ်လုပ်ရေးသင်တန်းများတွင် စုစုပေါင်း သင်တန်းသားဦးရေ (၂၂၄)ဦးဖြင့် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးသွား မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် နေပြည်တော်တွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ၌ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ် (အရှေ့အာရှ)၊ (၂၇)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲနှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံ အလှည့်ကျ ဥက္ကဌ ရာထူးတာဝန်များကို အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပဆောင်ရွက် သွားရမည်ဖြစ် သဖြင့် နေပြည်တော်သို့ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တော် များပိုမိုလာရောက်တည်းခိုနေထိုင် မည်ဖြစ်သည့်အတွက် တည်းခိုနေထိုင်မည့်ဟိုတယ်များတွင် စနစ်ကျသော ၀န်ဆောင်မှုကောင်း များပေးနိုင်အောင် အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းကောင်းများ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရေး အတွက် ယခုလို သင်တန်းများဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိဂုဏ်သိက္ခာ၊ မိမိဟိုတယ် ဂုဏ်သိက္ခာ၊ နိုင်ငံ့ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်ကျဆင်းခြင်း မရှိအောင် ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းများ၊ တာဝန်ရှိသည့် ဟိုတယ်မန်နေဂျာ၊ အထွေထွေမန်နေဂျာများမှ စေတနာထား ကြိုးစားဆောင်ရွက် သွားရန် လိုအပ်ကြောင်း မှာကြားခဲ့ပါသည်။
သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယ ၀န်ကြီးဒေါက်တာတင်ရွှေ နှင့် ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများ၊ မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်း အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဦးရန်ဝင်း၊ နေပြည်တော်ဟိုတယ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဥက္ကဌ နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ဟိုတယ်အထွေထွေ မန်နေဂျာများ၊ သင်တန်းကျောင်းများမှ သင်တန်းနည်းပြ များ နှင့် ဖိတ်ကြားထားသူများ၊ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
၄င်းနောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် နံနက် (၀၉း၃၀)နာရီအချိန်တွင် ၄င်းဟိုတယ် အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ် (အရှေ့အာရှ) အခမ်းအနားတွင် တက်ရောက်လာမည့် ဧည့်သည်တော်များ တည်းခိုနေထိုင်စားသောက်ရေး အဆင်ပြေစေရေး အတွက် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ် (အရှေ့အာရှ) စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Asia Holidays Travels Co.,Ltd မှ Managing Director Mr. Jean Michel Romon ခေါင်းဆောင်သောအဖွဲ့နှင့် နေပြည်တော်ရှိ တည်းခိုမည့် ဟိုတယ် (၃၉)လုံးမှ ဟိုတယ်အထွေထွေ မန်နေဂျာများ၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်၍ အမှာစကားပြောကြားကာ လိုအပ်သည်များ ဖြည့်ဆည်းညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဌေးအောင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေးနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E Ms Katja N၀rdgaard အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted on May 20, 2013 by admin	(နေပြည်တော်၊ ဧပြီ-၃၀)
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဌေးအောင် သည် ယနေ့ နံနက်(၀၉း၃၀)နာရီအချိန်တွင် ရုံးအမှတ်(၃၃) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ၏ ဧည့်ခမ်းမ ၌ နော်ဝေးနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E Ms Katja N၀rdgaard အား လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံပွဲတွင် နော်ဝေးနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး မှ ဆွေးနွေးရာတွင် လက်ရှိနိုင်ငံရေး တိုးတက်ပြောင်း လဲ ဖြစ်ထွန်းလာမှုနှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်ကို ကြားသိရ ပါကြောင်း၊ ယင်း အတွက်နော်ဝေးနိုင်ငံ၏ ငွေကြေးအကူအညီ၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏နည်းပညာ အကူအညီတို့ဖြင့် ဆောင် ရွက်လျှက်ရှိသော မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းပင်မ စီမံကိန်း ဆောင် ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေများကိုလည်း သိရှိရ ပါကြောင်း၊ ပင်မစီမံကိန်းပြီးစီးပါက ခရီးသွား လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆက်လက်ဦးစားပေး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လိုသည်များကို သိရှိလို ပါကြောင်း စသည်ဖြင့် ဆွေးနွေးပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ပြန်လည်ဆွေးနွေးရာတွင် နော်ဝေးနိုင်ငံအစိုးရ၏ ကူညီထောက်ပံ့မှု၊ အာရှ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ နည်းပညာအကူအညီဖြင့် ရေးဆွဲလျှက်ရှိသည့် Tourism Master Plan ဆောင်ရွက်ပြီး စီးမှုအခြေအနေ၊ ထုတ်ပြန်နိုင်မည့်အခြေအနေနှင့် နေပြည်တော်တွင် ယခုနှစ် ဇွန်လ၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ် (အရှေ့အာရှ) တွင် စီမံ ကိန်းရေး ဆွဲရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ပါမောက္ခ Dr Paul Roger မှရှင်းလင်းတင်ပြရန် စီစဉ်ထား ရှိမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအားခရီးစဉ်ဒေသတစ်ခုအဖြစ်မြှင့်တင်နိုင်ရန်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ယခု အခါ Nation Branding Campaign လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် CNA နှင့် BBC တို့တွင် ထုတ်လွှင့်နိုင်ရေးအတွက် Image Diplomacy အဖွဲ့က တာဝန်ယူပြီး ရိုက်ကူးရေး ပညာရှင် အဖွဲ့မှ မြန်မာပြည် ၏ ထင်ရှားသော နေရာဒေသများကို ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေးဖိုရမ် (အရှေ့အာရှ) ကျင်းပချိန်နှင့် ကိုက်ညီ၍ မြှင့်တင်ကြော်ငြာ ရန်စီစဉ် လျက်ရှိ ပါကြောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ဆက်လက်ဆွေးနွေးရာတွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကမ္ဘာလှည့် ခရီး သည် (၁)သန်းကျော် ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် (၃)သန်းခန့် ၀င်ရောက်နိုင်ရေး မျှော်မှန်းလုပ်ဆောင်နေမှုအစီအစဉ်များ၊ ဧည့်သည်တိုးတက် ၀င်ရောက် လာ သည်နှင့်အမျှ လိုအပ်သည့်အခြေခံ အဆောက်အဦများ ဖွံ့ဖြိုးအောင် ဆောင်ရွက်ရ မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အင်းလေး ကန်ရေရှည်တည်တံ့ရေးနှင့် သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင် ထိန်း သိမ်းစောင့်ရှောက် မှု အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးကြပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ဆက်လက်ဆွေးနွေးရာတွင် Tourism Master Plan မှာ တစ်ပြည်လုံး အတွက် ခြုံငုံရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပြီး နောင်တွင် ဒေသအလိုက်အသေး စိတ်ရေးဆွဲ အကောင် အထည်ဖော်ရန် လိုအပ် မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရန်ဒေသအလိုက် အသက်မွေးမှု သင်တန်းကျောင်းများ လိုအပ်သကဲ့သို့ အဆင့်မြင့်ပညာရေးအစီအစဉ် အတွက် လည်း ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဌေးအောင် မြန်မာနိုင်ငံရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ (၈)ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် သင်းလုံးကျွတ် အထွေထွေအစည်းအဝေးနှင့် အလုပ်အမှုဆောင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲသို့တက်ရောက်မှာကြား
Posted on May 20, 2013 by admin	(နေပြည်တော်၊ ဧပြီ – ၂၉ ရက်)
မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ (၈)ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်သင်းလုံးကျွတ် အထွေ ထွေ အစည်းအဝေးနှင့် အလုပ်အမှုဆောင်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲကို ဧပြီလ (၂၈)ရက်နေ့ တွင် အင်းလျားကန်ဟိုတယ် မင်္ဂလာခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးဦးဌေးအောင် တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာ စကားပြော ကြားသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းလိုင်စင် ရရှိလုပ်ကိုင်နေ သူ (၁၀၄၀)ရှိပြီး အသင်းသားဦးရေ (၆၁၉)ဦးရှိသည့်အနက် ယခုအစည်းအဝေး သို့ အသင်းသား ဦးရေ (၃၅၆) ဦး တက်ရောက်သဖြင့် အစည်းအဝေးအထမြောက်ပါကြောင်း၊ ယခု အစည်းအဝေး တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကို ပြန်လည်ရွေး ချယ်ရာ၌ အသင်းသားများ၏ သဘောဆန္ဒနှင့်အညီ မျှတမှုရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးသွား မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၂၀၁၂ အတွင်း ရန်ကုန်၊ မန္တလေးဝင်ပေါက် မှ နိုင်ငံခြား ခရီး သွားဧည့်သည် (၆)သိန်းခန့်၊ နယ်စပ်ဝင်ပေါက်များ မှ (၄)သိန်း (၆)သောင်းခန့်ဖြင့် စုစုပေါင်း နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်သည် (၁)သန်း (၆)သောင်းခန့် ၀င်ရောက် ခဲ့ပါကြောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့၌ ဟိုတယ်အခန်းအရေအတွက် (၉)ထောင်ခန့်နှင့် လိုင်စင်ရဧည့်လမ်းညွှန် (၇၉၀၀) ခန့်ရှိပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာ ယခုထက်ပိုမို တိုးတက်လာမည်ဖြစ်သဖြင့် အသင်းသားများအနေဖြင့် နားလည်မှု၊ စည်းလုံးမှု၊ စာနာမှုတို့ဖြင့် ညီညီညွတ်ညွတ် လုပ်ကိုင် သွားကြရန် လိုအပ်ပါကြောင်း မှာကြားသည်။
ဆက်လက်၍ မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ရွေးချယ် တင်မြှောက်ပွဲအား ဆက်လက်ကျင်းပရာ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာတင်ရွှေ၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းသား ဦးရေ (၆၁၉)ဦးအနက် (၃၅၆)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး အသင်းသားများက စနစ်တကျ မဲပေးရွေး ချယ်ခဲ့ကြရာ ဆန္ဒပြုလွှာ တင်သွင်းထားသူ (၃၄)ဦးအနက် မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွား လုပ်ငန်း ရှင်များ အသင်း ဥက္ကဌအဖြစ် ဒေါက်တာအောင်မြတ်ကျော် နှင့် အလုပ်အမှု ဆောင် (၁၅)ဦး တို့ကို ရွေး ချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြပါသည်။
၄င်းနောက်ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာတင်ရွှေ မှ မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်း ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရရှိစေရန်အတွက် အသင်းသားများမှ စည်းလုံးညီညွတ် စွာဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြရန် မှာကြား၍ အခမ်းအနားအား ရုတ်သိမ်းလိုက်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
Increase of Inlay Lake Zoning Fees
Posted on May 9, 2013 by admin	1. Beingacultural as well as an eco-tourism site, Inlay Lake in the Southern Shan State of Myanmar has achieved significant tourism growth from time to time. Asaresult, it becomes very important to pay substantive attention to the conservation tasks that support sustainable development of Inlay Lake and its environs. 2. To fullfil this purpose, the Inlay Lake Zoning Fees has been decided to increase from USD5to USD 10 per tourist with effect from 1 October 2013. 3. In order to appropriately and systematically use of the collected zoning fees, the Government of Shan State shall formaBudget Committee which comprises the following repesentatives: (a) Group of Representatives led by Chief Minister of Shan State;
(b) Representatives from the concerned Ministries (Ministry of Environmental Conservation and Forestry, Ministry of Hotels and Tourism);
(c) Local Representatives (Patrons of townspeople);
(d) Respective Representative(s) of Hluttaw (Parliament);
(e) A Chairperson each from Local Hotel Zone, Union of Myanmar Travel Association and Union of Myanmar Tourist Guide Association; (f) Representatives recommended by Chief Minister of Shan State (If necessary)
4. The Budget Committee shall take the following responsibilities: (a) The Government of Shan State shall collect the zoning fees and control the budget inatransparent manner;
(b) The Budget Committee will discuss the work plan to use the budget and the amount of budget to be spent for the agreed activities;
(c) The Committee shall take the responsibility mentioned in (b) with the approval of Chief Minister of Shan State;
(d) The Committee shall openasaving account at Myanmar Economic Bank and control the saving systematically;
(e) The Committee shall keep financial documents on budgetary status systematically which shall be audited;
(f) The Committee shall submitaquaterly report on the work done and the future work plan to the higher authority
5. The budget allocation will be prioritized to the following tasks:
(a) to support sustainable development of Inlay Lake and its environs;
(b) to enhance the social welfare of the community;
(c) to promote Inlay Lake as an attractive tourist destination
အင်းလေးကန် ဇုန်ဝင်ကြေးတိုးမြှင့် ကောက်ခံခြင်း
၁။ ရှမ်းပြည်နယ်၊ အင်းလေးဒေသတွင် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့် အမျှ အင်းလေးကန် ရေရှည်တည်တံ့ရေး အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုဂရုပြု ဆောင်ရွက်နိုင်စေ ရန် အတွက် အင်းလေးဒေသဇုန်ဝင်ကြေး သတ်မှတ်ခြင်းကို တိုးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ထို့အတွက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁)ရက်နေ့မှစတင်၍ အင်းလေးဒေသဇုန်ဝင်ကြေး အား နိုင်ငံခြားဧည့်သည်တစ်ဦးလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅)ဒေါ်လာ မှ (၁၀)ဒေါ်လာ သို့ တိုးမြှင့် သတ်မှတ်သွားပါ မည်။
၃။ အဆိုပါဝင်ငွေကို အကျိုးရှိစွာနှင့် စနစ်တကျဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ သည် အောက်ပါကော်မတီတစ်ရပ်ဖွဲ့စည်း၍ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်သွားပါမည်-
(က) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးစီးသော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၊
(ခ ) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ်များ (ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေး ရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန)
(ဂ ) ဒေသခံကိုယ်စားလှယ် (မြို့မိမြို့ဖ)၊
(င ) ဒေသခံဟိုတယ်ဇုန်၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းနှင့် ဧည့်လမ်းညွှန်များအသင်းတို့မှ ဥက္ကဌ တစ်ဦးစီ၊
(စ ) လိုအပ်ပါက ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ဖြည့်စွက်ဖွဲ့စည်းနိုင်ပါသည်။
၄။ အင်းလေးဒေသဇုန်ဝင်ကြေး ဘဏ္ဍာငွေထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
(က) ဇုန်ဝင်ကြေးဘဏ္ဍာငွေများကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ တာဝန်ယူထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရန်၊
(ခ ) ဇုန်ဝင်ကြေးဘဏ္ဍာငွေဖြင့် သုံးစွဲမည့်လုပ်ငန်း၊ သုံးစွဲမည့်ငွေကြေးပမာဏကို ကော်မတီအဖွဲ့မှ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်ရန်၊
(ဂ ) ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့် သုံးစွဲမည့်ငွေကြေးပမာဏကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူဆောင်ရွက်ရန်၊
(ဃ) ဇုန်ဝင်ကြေးဘဏ္ဍာငွေကို မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင် ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်၍ စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်ရန်၊
(င ) လုပ်ငန်းအလိုက် ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲမှုများကို စာရင်းအင်းများ စနစ်တကျထားရှိပြီး စာရင်းစစ် အဖွဲ့မှ စစ်ဆေးမှုခံယူနိုင်သည်အထိ စနစ်တကျဆောင်ရွက်ရန်၊
(စ ) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများကို အထက်ဌာနသို့ (၃)လတစ်ကြိမ် အစီရင်ခံတင်ပြရန်၊
၅။ ရရှိသောဘဏ္ဍာငွေကို အောက်ပါလုပ်ငန်းရပ်များတွင် ဦးစားပေးသုံးစွဲသွားမည်ဖြစ်ပါသည်-
(က) အင်းလေးကန်ရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းများ၊
(ခ ) လူမှုအဖွဲ့အစည်း အကျိုးပြုမည့်လုပ်ငန်းများ၊
(ဂ ) အင်းလေးခရီးစဉ်ဒေသ မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာတင်ရွှေ ရန်ကုန်မြို့ရှိ တည် ဆောက်ဆဲ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဟိုတယ်စီမံကိန်းများနှင့် ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဟိုတယ်စီမံကိန်းများ အား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
Posted on April 30, 2013 by admin	(နေပြည်တော်၊ ဧပြီ-၂၉ ရက်)
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာတင်ရွှေ သည် (၂၇-၄-၂၀၁၃) ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်မြို့ရှိတည်ဆောက်ဆဲနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟိုတယ်စီမံကိန်း များနှင့်ပြည်တွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဟိုတယ်စီမံကိန်းများဖြစ်သည့် Traders Square Commercial Complex စီမံကိန်း၊ Center Point Tower Hotel စီမံကိန်း၊ Rose Garden Hotel စီမံကိန်း၊ Shangrila Hotel စီမံကိန်း၊ Nov၀tel Yangon Hotel စီမံကိန်း၊ Pyi Garden Condomenium စီမံကိန်းများသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး တိုးတက်ရောက်ရှိလာသော နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွား ဧည့်သည်များ ရန်ကုန်မြို့သို့ရောက်ရှိလာသည့်အခါ အဆင်ပြေစွာတည်းခို နေထိုင်နိုင်ရန် အတွက်နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဟိုတယ်အခန်းများ လုံလောက်စွာ တည်ဆောက်ပြီးစီးရေးအတွက် စီမံကိန်းများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ပေးသွားမည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီများ အနေဖြင့်လည်း စီမံကိန်းများကို သတ်မှတ်ကာလများအတွင်း ပြီးစီးအောင်ကြိုး စား ဆောင်ရွက်သွားကြရန် မှာကြားခဲ့ပါသည်။
Traders Square Commercial Complex စီမံကိန်းသည် ဆူးလေဘုရားလမ်းတွင်တည်ရှိပြီး စင်္ကာပူ နိုင်ငံ Traders Square Ltd မှ စစ်ထောက်ချုပ်ရုံးနှင့် သဘောတူညီ၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်ပြီး ရုံးခန်းများ၊ အရောင်းဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ ပါဝင်ပြီး ၂၀၁၅ နှစ်ကုန်ခန့်တွင် ဖွင့်လှစ်ရန် လျာထားပါသည်။
Center Point Tower Hotel စီမံကိန်းသည် ဆူးလေဘုရားလမ်းတွင် တည်ရှိပြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှ L.P Holding Co.,Ltd မှ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနနှင့် သဘောတူညီ၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပြီး (၁၆-၉-၂၀၁၀)ရက်နေ့တွင် ရုံးခန်းအဆောက်အဦအား စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ဟိုတယ်အခန်း(၃၀၀)ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ပြီးစီး အောင် ဆောင် ရွက် လျှက်ရှိသည်။
Rose Garden Hotel စီမံကိန်းသည် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်းတွင် တည်ရှိပြီး ဟောင်ကောင်အခြေစိုက် Emerald Rose Garden Ltd မှ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာနနှင့် သဘောတူညီ၍ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း အခန်း (၂၀၀)နှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း အခန်း(၈၈)ခန်း၊ စုစုပေါင်း (၂၈၈)ခန်း ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိသည်။
Shangrila Hotel စီမံကိန်းသည် ကန်တော်ကြီး ကန်ရိပ်သာလမ်းတွင် တည်ရှိပြီး စင်္ကာပူနိုင်ငံ Shangrila အုပ်စုမှ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနနှင့် သဘောတူညီ၍ ဟိုတယ်၊ Serviced Apartment နှင့် စီးပွားရေးအဆောင်အဦများ တည်ဆောက်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပြီး ပထမ အဆင့်အနေဖြင့် အခန်း (၂၄၀)ပါ Serviced Apartment (၂)လုံး ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ကုန်တွင် ဖွင့်လှစ်ရန် ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိပါ သည်။
Novotel Yangon Hotel စီမံကိန်းသည် ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ပြည်လမ်းမပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး နိုင်ငံသား ပိုင် Max Myanmar ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ယူ၍ အခန်း (၃၆၆)ခန်းပါ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဟိုတယ်ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် အတွင်းဖွင့်လှစ်ရန် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
Pyi Garden Condomenium စီမံကိန်းသည် စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ပြည်လမ်း တွင်တည် ရှိပြီး ပြည်တွင်း နိုင်ငံသားပိုင် ဇေကမ္ဘာကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပြီး အဆင့်မြင့် လူနေအိမ်ခန်း (၁၇၆)ခန်း နှင့် ရုံးခန်း (၂၈)ခန်းပါဝင်ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိပါကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၊ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဌေးအောင်၊ နေပြည်တော်တွင် ဇူလိုင်လ ပထမပါတ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် World Economic Foreumအခမ်းအနားအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် တည်းခိုနေထိုင်ရေး၊ဧည့်ခံကျွေးမွေးရေး ကိစ္စများအား အဆင်ပြေစေရန် ဟိုတယ် အထွေထွေမန်နေဂျာများနှင့် တာဝန်ခံများအား တွေ့ဆုံမှာကြား
Posted on April 26, 2013 by admin	(နေပြည်တော်၊ ဧပြီ- ၂၆ ရက်)
World Economic Foreum အား နေပြည်တော်တွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၅)ရက်နေ့မှ (၇)ရက်နေ့ အထိ ကျင်းပဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာသည့် ဧည့်သည် တော်များတည်းခိုနေထိုင်ရေး၊ ဧည့်ခံကျွေးမွေးရေးကိစ္စများအား အဆင်ပြေစွာဆောင် ရွက်နိုင်စေရန်အတွက် ယနေ့နံနက် (၁၁း၀၀)နာရီအချိန်တွင် ရုံးအမှတ်(၃၃)၊ ကျောက်စိမ်း အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဌေးအောင် သည် နေပြည်တော်ဟိုတယ်ဇုန်ရှိ ဟိုတယ်များမှ ဟိုတယ် အထွေထွေမန်နေဂျာများနှင့် တာဝန်ခံ များအား တွေ့ဆုံမှာကြားသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ မှာကြားရာတွင် နေပြည်တော်ဟိုတယ်ဇုန်၌ ယနေ့အထိ အခန်းပေါင်း(၂၄၇၆) ခန်းအထိ တည်းခိုနေထိုင်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ထားရှိပြီး World Economic Foreum အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန် စာရင်းပေးထားသည့် အခန်းပေါင်းမှာ (၁၂၈၃) ခန်း ရှိသဖြင့် ဧည့်သည်များအတွက် အခန်း လုံလောက်မှုရှိပါကြောင်း၊ ထပ်မံလိုအပ်လာမည့် ဟိုတယ်အခန်းများအတွက်လည်း တာဝန်ရှိ သူများမှ ၀န်ကြီး ဌာနနှင့်ဆက်စပ်သတင်းရယူ၍ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရှိရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ယခုကျင်းပမည့် အခမ်းအနားမှာ နိုင်ငံတော်အဆင့် အခမ်းအနားကြီးဖြစ်သဖြင့် အထူးဂရု စိုက်ဆောင်ရွက် သွားရန် လိုအပ်ပါ ကြောင်း၊ တည်းခိုနေထိုင်မည့် ဧည့်သည်တော်များ စိတ်ချမ်းမြေ့စွာ တည်းခိုနေ ထိုင်နိုင်ရေးအတွက် ဟိုတယ် များအလိုက် ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု ကောင်းမွန်စေရေး၊ ၀န်ထမ်းများ အား သေချာ စွာလေ့ကျင့်ညွှန်ကြား စစ်ဆေး ကြပ်မတ်သွားရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ဧည့်သည်တော်များအတွက် အတတ်နိုင်ဆုံး လိုအပ်သည်များကို ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးသွားရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် တည်းခိုနေထိုင်မည့် အခန်းများ အဆင့်မီ ကောင်း မွန်ရေး၊ ကျွေးမွေးဧည့်ခံသည့်အစားအစာများ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်ရေး၊ ၀န်ဆောင်မှုပြုရာတွင် ဧည့်သည်များကျေနပ် မှုရှိရေး တို့ကို ဟိုတယ်အထွေထွေ မန်နေဂျာများနှင့် တာဝန်ရှိသူများမှ အထူးအလေးထား ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက် သွားရန် လိုအပ်ပါကြောင်း မှာကြားပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ဆက်လက်မှာကြားရာတွင် ဟိုတယ်များရှိ ၀န်ထမ်းများ ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု ကျွမ်း ကျင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်အတွက် ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်း (၄)မျိုးကို နေပြည်တော် ဟိုတယ်ဇုန်တွင် မေလ(၆)ရက်နေ့မှစတင်ပြီး ရက်သတ္တပတ်(၄)ပတ်ကြာ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်၍ ဟိုတယ်များအလိုက် ၀န်ထမ်းများပါဝင်တက်ရောက်ရေး ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်သွားစေလိုပါကြောင်း၊ ယခုသင်တန်း သည် World Economic Foreum အခမ်းအနားတွင် ဧည့်သည်တော်များအား ဧည့်ခံ ၀န်ဆောင်မှုပေးရာတွင် အထောက်အကူပြုစေနိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း ရှင်းလင်း မှာကြားသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားသို့ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာ တင်ရွှေ နှင့် ဌာနတာဝန်ခံအရာရှိများ၊ နေပြည်တော်ဟိုတယ်ဇုန်ရှိ ဟိုတယ်များမှ ဟိုတယ်အထွေထွေ မန်နေဂျာများနှင့် တာဝန်ခံများ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Posted on April 22, 2013 by admin	ဧည့်လမ်းညွှန်(အခြေခံ)သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄၂)
သင်တန်းကြေး - ၁၀၀၀၀၀ကျပ်
သင်တန်းကြေးကောက်ခံသည့်ကာလ - ၂၃-၄-၂၀၁၃နေ့မှ ၃၀-၄-၂၀၁၃ နေ့အထိ
သင်တန်းကာလ - ၆-၅-၂၀၁၃နေ့မှ ၂၈-၆-၂၀၁၃ နေ့အထိ
ဧည့်လမ်းညွှန်(အခြေခံ)သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄၂) သင်တန်းဖွင့်ပွဲရက်ကြေငြာခြင်း
သင်တန်းဖွင့်မည့်ရက် - ၆-၅-၂၀၁၃ (တနင်္လာ)
နေရာ - ပန်ဒါဟိုတယ်
အချိန် - (၀၈း၀၀)နာရီအရောက်
အမျိုးသား - အမျိုးသားဝတ်စုံ (တိုက်ပုံ)
အမျိုးသမီး - မြန်မာအမျိုးသမီးဝတ်စုံ
သင်တန်းကြေးလက်ခံသည့်ကာလ - ၁-၇-၂၀၁၃မှ ၅-၇-၂၀၁၃ နေ့အထိ
သင်တန်းကာလ - ၈-၇-၂၀၁၃နေ့မှ ၃-၉-၂၀၁၃ နေ့အထိ
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဌေးအောင် နေပြည်တော်၊ ဟိုတယ်ဇုန်ရှိ ဟိုတယ်များမှ ဟိုတယ်အထွေထွေမန်နေဂျာများ၊ တာဝန်ခံများအား တွေ့ဆုံမှာကြား
Posted on March 21, 2013 by admin	(နေပြည်တော်၊ မတ်-၂၀ ရက်)
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဌေးအောင်သည် ယနေ့ နံနက် (၉း၀၀)နာရီ အချိန်တွင် နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ် (၃၃)၊ ကျောက်စိမ်းအစည်းအဝေးခန်းမ၌ နေပြည် တော် ဟိုတယ်ဇုန်ရှိ ဟိုတယ်များမှ ဟိုတယ်အထွေထွေမန်နေဂျာများ၊ တာဝန်ခံများနှင့် တွေ့ဆုံအမှာ စကား ပြောကြားသည်။
တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှမှာကြားရာ၌ မကြာမီအချိန်ကာလအတွင်း နေပြည်တော်လေဆိပ် ကို ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါကြောင်း၊ နေပြည်တော်လေဆိပ်သို့ နိုင်ငံခြားသားခရီးသည် တင်ဆောင်မည့်လေယာဉ်များ ပုံမှန်ဆင်းသက်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံခြားသားခရီးသည် ရရှိရေးသည် အဓိက အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း၊ သို့အတွက် နေပြည်တော်သို့ လာရောက်လည်ပတ် မည့် နိုင်ငံခြား သားခရီးသည် များ ရရှိရေးအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ၀န်ကြီး ဌာနအနေဖြင့် ခရီးစဉ်ဒေသတစ်ခုအဖြစ် ဆွဲဆောင်နိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားရ မည်ဖြစ် ပါကြောင်း၊ နေပြည်တော်တွင် နိုင် ငံခြားသားခရီးသည် လာရောက်ပါက ဧပြီလမှဇွန်လအထိ ပထမ (၃)လ တာကာလအတွင်း လေဆိပ်မှတည်းခို သည့် ဟိုတယ်နေရာအထိ ပို့ဆောင်ရေး မော်တော်ယာဉ် အခမဲ့စီစဉ်ပေးခြင်း၊ နိုင်ငံခြားသားခရီးသည် တစ်ဦး လျှင် တစ်ညအိပ်ခရီးစဉ်ကာလအတွက် နံနက်စာ အပါအ၀င် တည်းခိုသည့်ဟိုတယ်အခန်းခအခမဲ့ စီစဉ်ဆောင် ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံခြားသား ခရီးသည် များအား ဖိတ်ခေါ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဇူလိုင်လမှ စက် တင်ဘာလအထိ ဒုတိယ (၃)လတာ ကာလအတွင်း တည်းခိုသည့် ဟိုတယ်အခန်းခကို (၁)ရက်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၀)နှုန်းဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားနိုင်ရေးအတွက် ယခုလို နေပြည်တော် ဟိုတယ် ဇုန်မှ တာဝန်ရှိ သူ များအား ခေါ်ယူတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ နေပြည်တော်တွင် လက်ရှိဖွင့်လှစ်ပြီး ဟိုတယ်ပေါင်း (၃၁)လုံး ရှိသည့်အတွက် ဟိုတယ်တစ်လုံးလျှင် တစ်ရက်လျှင် (၁၀)ခန်းနှုန်းဖြင့် အခန်းပေါင်း (၃၁၀)ခန်းနှင့် ဆောင်ရွက်သွားရန် လျာထားပါကြောင်း၊ နေ့စဉ်လေဆိပ်မှ ဟိုတယ်ဇုန်အထိပို့ဆောင်ပေးနိုင်ရေး အတွက် (၄၅)ဦးဆန့် မော်တော်ယာဉ် (၅)စီးခန့်ဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဤကဲ့သို့ ကြော်ငြာမြှင့်တင်၍ ဆွဲဆောင်မှုဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးပါကနိုင်ငံခြားသား ခရီးသွား ဧည့်သည်များ ယခုထက် ပိုမို တိုးတက်ရောက်ရှိလာပြီး ရေရှည်တွင် နေပြည်တော်ဟိုတယ်ဇုန်ရှိ ဟိုတယ်များ အနေဖြင့် လုပ်ငန်းပိုင်း တွင် အဆင်ပြေလာမည်ဖြစ်ပါ၍ ယခုကဲ့သို့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ သို့အတွက် ဟိုတယ် လုပ်ငန်း ရှင်များ ဟိုတယ်အလိုက်တာဝန်ခံများမှ ၀ိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါကြောင်း အကျယ် တ၀င့် ရှင်းလင်း မှာကြားသည်။
၄င်းနောက် တွေ့ဆုံပွဲသို့တက်ရောက်လာသည့် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အထွေထွေမန်နေဂျာ များနှင့် တာဝန်ခံများ၏ ဆွေးနွေးတင်ပြမေးမြန်းချက်များအပေါ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ပြန်လည်ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးပြီး အခမ်းအနားအား ရုတ်သိမ်းလိုက်ပါသည်။တွေ့ဆုံပွဲသို့ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာတင်ရွှေ နှင့် ဌာနတာဝန်ခံ အရာရှိကြီးများ မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဦးရန်ဝင်း နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ နေပြည်တော် ဟိုတယ် ဇုန်ရှိဟိုတယ်များမှ အထွေထွေမန်နေဂျာများနှင့် တာဝန်ခံများ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိ သည်။
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဌေးအောင် အား ဂျပန်နိုင်ငံ နိုင်ငံတကာရေးရာနှင့် မြေယာ၊ အဆောက်အဦ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး Mr.Hajime ISHIZU ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ လာရောက်တွေ့ဆုံ
Posted on March 19, 2013 by admin	(နေပြည်တော်၊ မတ်-၁၈ ရက်)
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဌေးအောင် အား ဂျပန်နိုင်ငံ နိုင်ငံတကာရေးရာနှင့် မြေယာ၊ အဆောက်အဦ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး Mr.Hajime ISHIZU ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့ညနေ (၄)နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ်(၃၃) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ သို့ လာရောက်တွေ့ဆုံ သည်။
တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး မှ ဆွေးနွေးရာ၌ ဂျပန်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုသည် ရှေးယခင် ကာလများကပင် အဓွန့်ရှည်တည်တံ့ခဲ့ကြောင်း၊ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခရီးသွား လုပ်ငန်း သည် နိုင် ငံရေး၊ စီးပွားရေးပြောင်းလဲလာမှုနှင့်အတူ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လျှက်ရှိပါကြောင်းနှင့် ယင်းတွင်ဂျပန်နိုင်ငံသား ခရီးသွားဧည့်သည်များလည်း တိုးတက်ရောက်ရှိလျှက်ရှိပါကြောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံမှ လေကြောင်းလိုင်းများ ပိုမိုတိုးချဲ့ပျံသန်းပြေးဆွဲပါက ဂျပန်နိုင်ငံသားခရီးသွားဧည့်သည်များလည်း ယခုထက်ပိုမိုလည် ပတ်ရောက် ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတိုးတက်မှုနှင့်အတူ အနာဂတ်လူငယ်များနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်း များတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်ပညာရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်များ လိုအပ် လျှက်ရှိပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် Responsible Tourism Policy အား ဂျာမဏီနိုင်ငံ Hanns Seidel Foundation အကူအညီဖြင့်လည်းကောင်း၊ Myanmar Tourism Master Plan အား နော်ဝေးနိုင်ငံအစိုးရ၏ ငွေကြေးအကူအညီ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ နည်းပညာအကူအညီ များဖြင့် ဆောင် ရွက်လျှက်ရှိရာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပံ့ပိုးကူညီပေးစေ လို ပါကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် Vocational Training (အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတတ်ပညာသင် တန်းကျောင်းများ ) ထူထောင်လိုပါ ကြောင်း ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ နိုင်ငံတကာရေးရာနှင့် မြေယာ၊ အဆောက်အဦ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ခရီးသွား လုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး Mr.Hajime ISHIZU မှ ပြန်လည်ဆွေးနွေးရာတွင် မိမိအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ သို့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့တွင် နိုင်ငံခြားခရီးသွား ဧည့်သည် အများအပြားလာရောက်လည်ပတ်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံသားများအနေဖြင့် လည်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းကို အထူးနှစ်ခြိုက်ကြသည်ဟု ကြားသိရပါကြောင်း၊ ယခု ဆွေးနွေးချက်များအား မှတ်သားပြီး ၀န်ကြီးအား ပြန်လည်တင်ပြဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ ၀န်ကြီးအနေဖြင့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်ရန် အထူးစိတ်အားထက်သန် လျှက်ရှိပါ ကြောင်းဖြင့် ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာတင်ရွှေ နှင့် ဌာနတာဝန်ခံအရာရှိများ တက်ရောက်ခဲ့ ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Posted on March 19, 2013 by admin	မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစတင်၍ သိသိသာသာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ပါ သည်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များရောက်ရှိမှုသည် ၂၀၁၁ခုနှစ်တွင် ၃% တိုး ခဲ့သော် လည်း ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင်၃၀%အထိတိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်လုပ်ငန်းဟူသည် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး အရင်းအနှီးများပြား စွာဖြင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု များစွာရရှိသော လုပ်ငန်းအမျိုးစားဖြစ်သည်။အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြားဝင်ငွေ ရရှိခြင်း၊ အလုပ်ကိုင်များရရှိခြင်း၊ နည်းပညာဗဟုသုတများရရှိခြင်း၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အထောက်အကူပြုခြင်းနှင့် နိုင်ငံတကာနှင့်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုရခြင်းမှအစပြု၍ ဆင်းရဲမှုလျော့ချရေးအထိ အထောက်အကူပေးသောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။
ဤလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကအားဖြင့် လာရောက်လည်ပတ်မှု လွယ်ကူရေး၊ နေထိုင် တည်းခို မှုဖူလုံရေး၊လှည့်လည်ကြည့်ရှုဖွယ်ရာများပြည့်စုံခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောစီမံခန့်ခွဲမှုရှိခြင်းတို့သည် အခြေခံလိုအပ်ချက်များဖြစ်ပေသည်။
သို့ဖြစ်ရာဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည် များအဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာ ပိုမိုတိုးတက်ကာလာ ရောက်စေပြီး၎င်းတို့နေထိုင် လည်ပတ်ရေး အတွက် လိုအပ်သော အစီအမံများချမှတ်၍ပံပိုးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ဤသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ၏လိုအပ်ချက်များ ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည့် နိုင်ငံ တကာအဆင့်မီဟိုတယ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးအခန်းများ လုံလောက်စွာပေါ်ထွန်းလာရေးသည်လည်း အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ဟိုတယ်လုပ်ငန်းဟူသည်ကား အရင်းအနှီးများစွာ စိုက်ထုတ် ရပြီးတတ်ကျွှုမ်းနားလည်စွာစီမံခန့််ခွဲရန်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းဖြစ်သကဲ့သို့မြေအသုံး ချခ၊ဌားရမ်းခနှင့် အခြားအ ခွန်များရခြင်း၊ဒေသခံ များအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်း များဖန်တီးပေးခြင်း ၊ဒေသ ထွက် စားကုန် များရောင်းချရခြင်းနှင့်နိုင်ငံတော်၏လိုအပ်သော အစည်းဝေးကြီးများ၊ဆွေနွေး ပွဲပြပွဲကြီ များနှင့်မင်္ဂလာ ပွဲကြီးများအဆင့် မီမီကျင်းပနိုင်ခြင်းတို့အတွက်များစွာအထောက်အကူပြုပါသည်။
နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဟိုတယ်လုပ်ငန်းအတွက် လုံလောက်သောအရင်းအနှီးနှင့် နည်းပညာ လိုပါသည်။ ဤအရင်းအနှီးနှင့်နည်းပညာများကိုအဓိကအားဖြင့် ဤလုပ်ငန်းထွန်းကားနေသော ပြည်ပနိုင်ငံ ကြီးများ ကရရှိပါသည်သို့ဖြစ်ပါ၍မြန်မာနိုင်ငံသို့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဟိုတယ်များလာရောက်တည်ဆောက် လုပ် ကိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီမြုပ်နှံမှု ဥပဒေကလည်း အသစ်ပြဌာန်းဖြေလျော့ပေးသကဲ့သို့ ၀န်ကြီး ဌာန ကလည်းလက်ကမ်း၍ ဖိတ်ခေါ်လျက်ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် နိုင်ငံခြာရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကအသစ်ဖွင့်လှစ်မှု အစပျိုးချိန်ဖြစ်၍ မြေစမ်းခရမ်းပျိုးမေးမြန်းစုံစမ်းကြပါသည်။ ထိုအထဲတွင် အိမ်နီးချင်း ဗီယက်န မ်နိုင် ငံ မှHoang Anh Gia Lai Myanmar Co, Ltd သည် ဟိုတယ်နှင့်စီးပွားရေး အဆောက် အအုံများကို ဤ၀န်ကြီး ဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်၍ ပထမဆုံးရင်းနှီးမြုပ်နှံသူဖြစ်ပါ၍လှိုက်လဲစွာကြိုဆိုရပါသည်။
ဤဟိုတယ်လုပ်ငန်းမစတင်မီကာလကပင် ပြည်တွင်းသတင်းဂျာနယ်များကစုံစမ်းမေမြန်းကြရာ ၀န်ကြီး ဌာနကအရေးတယူလှိုက်လဲစွာရှင်းလင်းပြသခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ကလည်း ဂျာနယ်အချို့ တွင်ဖော်ပြသည် ကို တွေ့ ရပါသည်။ဒါတင်မကဒေသတွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းအစည်းအဝေးများ နှင့်ဆက်စပ်ကျင်းပသော ခရီး သွားပြပွဲဆွေးနွေးပွဲများ၌လည်း ရှင်လင်းအသိပေးခဲ့ကြပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာလုပ်ငန်းဆောင် ရွက်ခွင့် က်ိုမြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဥပဒေစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ အဆင့်ဆင့် တင်ပြခဲ့ပြီး ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွာလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံHoang Anh Gia Lai Co,ltd တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံရင်နှီးမြုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ခွင့်ပြုမိန့်(၃၀.၁၁.၂၀၁၂ )ရက်စွဲ ပါ(၅၂၅/၂၀၁၂)ဖြင့်ရန်ကုန်မြို့အမှတ်(၁၉၂) ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းနှင့်စက်မှု(၁)လမ်းထောင့်ရှိ ယခင်အမှတ်(၁)စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ရုံးဟောင်းနေရာရှိ မြေဧရိယာ(၁၈.၁၃၁)ဧကတွင် နိုင်ငံတကာအဆင်မှီ ဟိုတယ်နှင့်စီးပွားရေးအဆောက်ဦးများဆောက်လုပ် ရန်(၁၈.၁၂.၂၀၁၂)ရက်နေ့တွင်B.O.T contractနှင့် Lease Agreement နှစ်ဖက်သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီးလုပ်ငန်းများ အကောင်ထည်ဖော်ဆောင် ရွက်လျက်ရှိပါသည်။လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းအခမ်းအနားအကြောင်းကို၂၀.၁၂.၂၀၁၂ ရက်(အင်္ဂါ)နေ့ထုတ် The New Light Of Myanmar တွင်လည်းကောင်း (၁၉.၁၂.၂၀၁၂) ရက်နေ့ည (၈.၀၀)မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းတွင်လည်းကောင်း(၄.၂.၂၀၁၃) ရက်(တနလာင်္)နေ့ ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင်လည်းကောင်း၊ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သော အခြားပြည် တွင်းဂျာနယ်များတွင်လည်းကောင်းအသီးသီး ထုတ်ပြန်ကြေငြာထားခဲ့ပါသည်။ဆက်လက် ၍ဒေသတွင်း ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆွေးနွေးပွဲများတွင်တင်ပြခြင်း၊နိုင်ငံခြား သတင်း ဌာနများ မှဟိုတယ်လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာကိုသိလို၍မေးမြန်းလာမှုများကိ်ုလည်း သတင်းပေး လျက်ရှိ ပါသည်။
အဆိုပါစီမံကိန်းအားရင်နှီးမြုပ်နှံမှုတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၃၀၀)သန်းဖြင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံ၍ အခန်း(၄၁၄) ခန်းပါ Five Starဟိုတယ်နှင့်အခန်း(၅၈၅)ခန်းပါ Commercial Centreနှင့် Office Building No(1) ကိုပထမအဆင့်အနေဖြင့့်် ၂၀၁၆ ဇွန်လနောက်ဆုံးထား၍ ဖွင့်လှစ်ရန်အဖြစ်လည်ကောင်း၊ အခန်း (၃၅၄)ခန်းပါ Office Building No(2)နှင့် (၂၃၉၆) ယူနှစ်ပါ Service Apartments(၄)လုံးကို ဒုတိယ အဆင့်အနေဖြင့်၂၀၁၉ခုနှစ်ဇွန်လနောက်ဆုံးထား၍ဖွင့်လှစ်ရန် အဖြစ် လည်းကောင်း ကာလသတ် မှတ်ဆောင် ရွက် လျက်ရှိပါသည်။
ယခုအခါတွင်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအခြေပြု Hoang Anh Gia Lai Co,ltd သည် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ဤ၀န်ကြီးဌာနအပါအ၀င်ဌာနအသီသီးကဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များနှင့် အညီပံပိုးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် တိုးတက် လာသောနိုင်ငံနှင့်ပြည်သူလူထု အတွက် ဆင့်ပွားအကျိုး သက်ရောက်မှုရှိစေသော ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုအရှိန်အဟုန်ကို နှောင်နှေးစေမည့်အဟန်အတား လိုအပ်ချက်များကိုမဟာဗျူဟာ စီမံကိန်းများ ချမှတ်ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အထူးသဖြင့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ စိတ်ဝင်စားစွာ လည်ပတ် သောရန်ကုန်၊မန္တလေး၊ပုဂံ၊အင်းလေးဒေသများတွင် ဟိုတယ်အခန်းများ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေး အတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကိုကြိုဆိုလျက်ရှိပါကြောင်းဖော်ပြလိုက်ရပေသည်။
Recent Posts	ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဌေးအောင် ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှု ဆိုင်ရာ သင်တန်းများအမှတ်စဉ် (၁၁/၂၀၁၃)သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားနှင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ် (အရှေ့အာရှ) အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်မည့်ဧည့်သည်တော်များ တည်းခိုနေထိုင် စားသောက်ရေး အဆင်ပြေစေရေးအတွက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်မှာကြား
Tourism Latest News	Proudly powered by WordPress.